Kufungira kwaSofia: pakati pokuwa kweRusvingo neSpanish Civil War | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | | Biography, Mabhuku, Novela
Rusvingo rwemadziro eBerlin
Kufungira kwaSofia (2019) inhoroondo yenhema yakagadzirwa nemunyori wechiSpanish Paloma Sánchez-Garnica. Iyo rondedzero inofamba pakati penguva mbiri dzakakodzera dzeSpain neGerman mukati mehafu yechipiri yezana ramakore rechiXNUMX. Kune rimwe divi: the late Francoism in Madrid; kune rimwe racho: makore pamberi pekudonha kweRusvingo rweBerlin muguta guru reGerman.
Munyori weMadrid anotora mukana weichi chirevo ku rondedzera raive basa revakadzi mushure meSpanish Civil War. Mukufananidza, chiitiko chinotsanangura chinonakidza chiitiko chevasori chakakomberedza rusvingo rwekongiri chakaparadzanisa mhuri dzeBerlin kubva muna 1961 kusvika 1989. Pamusoro pezvo, pane mukana wenyaya yerudo inonakidza uye yakasimba iyo inosanganisira protagonist.
1 Pfupiso yekufungirwa kweSofia
1.2 Tsamba yacho
1.3 Nguva dzenhoroondo
2.1 Iyo nyaya yaSofia yakazvarwa sei
2.1.1 Zvakaitika kwauri
2.1.2 Kufuridzirwa uye masitaera
3 Nezve munyori, Paloma Sánchez-Garnica
Pfupiso ye Kufungira kwaSofia
Madrid, 1968; Udzvanyiriri hwaFranco huri mumakore ayo ekupedzisira. Ikoko, Daniel naSofía Sandoval vanogadzira muchato nehupenyu hwakadzikama. Kune rimwe divi, ndiye ega mwana wegweta Romualdo Sandoval, director wekambani yemutemo inozivikanwa nekudyidzana kwe "Generalissimo." Aya mamiriro anogadzira mumurume zvimwe zvivakwa zvinobva mukuenzanisa nababa vake.
Kune rumwe rutivi, Sofia mukadzi akangwara kwazvo, ane kugona kukuru kwesainzi (pamusoro pezvo, baba vake musayendisiti). Zvisinei, iye —Safanana neruzhinji rwevakadzi venguva iyoyo- haana zvake zvisarudzo. Muchokwadi, chero mhuri kana chirongwa chakazvimirira chinotsamira chose pakubvumidzwa kwemurume wako anochengetedza pfungwa.
Maitiro ezuva nezuva e Sofía uye Daniel pamwe nevanasikana vake vaviri vanobva kumhuri yakapfuma isina zvinonetsa zvakawanda. Zvisinei, zvakadzika pasi, iye kwete izvi chose kugutsikana nehupenyu hwake semurume nemukadzi. Chii zvakare, mukadzi uyu isa parutivi kudzidziswa kwake kuyunivhesiti kuzvipira pabasa remumba chete uye kufadza mumwe wake.
Zvese zvinhu zvinochinja zvakanyanya apo danieri anogamuchira tsamba kubva kune asingazivikanwe anotumira neruzivo runokanganisa nezvaamai vake vaanoda, Tabhenakeri. Tsamba yacho inoratidza kuti haasi amai vake chaivo.... Kana achida kuziva chokwadi, anofanira kuenda kuParis nekukasira, husiku ihwohwo. Zvakare, hunhu hunokosha hunowanikwa kune zvinotevera zviitiko: Klaus.
Kufungira kwaSofia ...
Usati waenda, Daniel Iye anobvunza baba vake nezvenyaya iyi, asi iyo yekupedzisira inokurudzira kuti vasiye zvakapfuura vega. Zvisinei, yambiro yaRomualdo inongowedzera kusava nechokwadi kwemugari wenhaka yake, uyo hazvitore nguva kuti zvishaike. Nenzira iyoyo, Sofia anotanga kutsvaga kwekukurumidza pakati pehafu yeEurope kuti azive kupi uye kunyanya nei yako murume aenda.
MuParis vanosunungurwa kuratidzwa kwe akadanwa Chivabvu French - pamwe - ratidziro huru kwazvo yakamboonekwa muWestern Europe. Panguva iyoyo, bhuku rinotsanangura zvakadzama iyo intrahistory ye hwese hwehukama hwezvematongerwo enyika panguva iyoyo, kwete munzvimbo yeGallic chete, kunyanya muBerlin yakakamurwa nemadziro uye mukupedzisira-Franco Madrid.
Zvinhu zvekurangana nekuda kwekubatanidzwa kweKGB neStasi zvinowedzera mukufungidzira kweneti yatove yakaoma kunzwisisa. Saizvozvo, mabasa ehungwaru ari kushumirwa nehutongi hwaFranco ane kutora chikamu chakakura. Zvese izvi zvinowedzeredzwa zvakakwana naPaloma Sánchez-Garnica's hunyanzvi kutandara kwenzvimbo dzezvakaitika.
Chimwe chezvinhu zvakakura zvemunyori wechiSpanish chiri mukuvakwa kwevanhu vake. Zvakawedzera, iyo inomiririra yevanopikisa vane hudzamu hwepfungwa hwemunhu chaiye. Nekudaro, muverengi anoona seyakavimbika manzwiro aSofia naDaniel, pamwe nekutambura, kutya, kunaka uye hurema hwenhengo dzese dzenyaya.
Pakupedzisira, iyo (inonzwisisika) hunyengeri uye kusagadzikana kwevasori kurangana kunogara pamwe chete pamwe nekushanduka kwekushanduka kwerudo rwevaSandoval vaviri. Nenzira yekuvhara, Kufungira kwaSofia inosiya meseji yepasirese: kana munhu akararama achidzvinyirirwa pasi pehutongi hwehudzvanyiriri (Daniel muFranco, Klaus kuEast Germany) haazokwanisa kurarama nerunyararo rwechokwadi.
Iyo nyaya yaSofia yakazvarwa sei
Sánchez-Garnica akaudza pepanhau ABC mu2019 vakapupurira mumunhu wekutanga yeiyo yese shanduko maitiro yakananga democracy mushure mekufa kwaFranco. Panyaya iyi, akati: “Hatina kumuka zuva rakatevera senyika ine hutongi hwezvido zvevanhu, zvakatora basa rakawandisa uye nemucheka wenguvo. Pakupedzisira, neBumbiro, takasvika pachibvumirano chekuenderera kumberi ”.
Saizvozvowo, munyori wechiSpanish aive muBerlin manheru ekuparadzwa kweanonzi Antifaschistischer Schutzwall --Dziviriro yeAntifascist - neGDR. Zvimwechetezvo, muguta guru reGerman akaona zvipikiso zvinopesana kumativi ese yekuvakwa kwekufananidzira kweCold War, iyo Schandmauer kana Wall of Shame, sezvo yakabhabhatidzwa kumadokero.
Kufuridzirwa uye masitaera
Mushure mekusunungurwa kwe Kufungira kwaSofia, munyori weIberia akataura kuti akafuridzirwa nevanyori vakasiyana venyika nevekunze panguva yekunyora. Pakati pezvinyorwa zvinotaurwa nezvazvo pane Colonel Chabert (1832) naHonoré de Balzac, Mukadzi waMartin Guerre (1941) naJanet Lewis uye Berta Isla (2017) kubva Javier Marias.
Zvirokwazvo, Sánchez-Garnica akakwanisa kusanganisa mamwe manyorerwo eaya matatu anotaurwa. Aya maficha anokosheswa kune yake yechitatu-munhu account iyo inowanzo sanganisa zvakapfuura uye zvazvino zviitiko. Mhedzisiro ibhuku anopfuura mapeji mazana matanhatu nesimba rekukochekera kuvaverengi kubva pamutsara wekutanga kusvika wekupedzisira.
Nezve munyori, Paloma Sánchez-Garnica
Asati ave munyori, Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) aiita segweta, sezvo aine degree muMutemo, Geography uye Nhoroondo. Siwe zvinyorwa zvekutanga wakauya muna 2006 na Iyo huru arcanum. Zvadaro, muna 2009 yakatanga kuzivikanwa munyika yake thanks to kuburitswa kwakabudirira kwe Mhepo yekumabvazuva.
Vakabva vaoneka Mweya wematombo (2010), Maronda matatu (2012) uye Sonata yekunyarara (2014). Iyo chaiyo yekutsaurira yakauya pamwe nekumisikidzwa kwe Ndangariro yangu yakasimba kudarika kukanganwa kwako, anokunda 2016 Fernando Lara Novel Prize Nechikonzero ichi, munyori akaedza kugadzirira zvakakwana kuchengetedza bhawa kumusoro mubhuku rake rinotevera: Kufungira kwaSofia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Kufungira kwaSofia
Aísa Gungwa Rine Simba. Kubvunzana nemunyori we Ndiani Akaona Mermaid?
30 mitsara yakasarudzwa pamusoro pemanoveli